Tadiom-pitiavana | 7
Ny andro mialoha ny fetin'ny Krismasy, andro tsy iasana rahateo...
- "Allo Fano! ho avy ianao rehefa harivariva an! efa manomana sakafo tsara mihitsy aho io! Ataoko fa ho tianao daholo ny sakafo karakaraiko ato an!" hoy i Tahiana sady niangotingoty ery.
- "Tsy maninona fa izaho no mitondra labozia! Dia ampirehetintsika hatramin’ny misasak’alina. Aza matahotra ianao fa ho tonga aloha mihitsy ary aho e!"
Revo dia revo ny anao vavy, nikarakara ny sakafo, nanomana izay metimety. Handray vahiny tsinona!
Tonga ny tamin’ny 6 ora katroka!
Naneno ny bokotra fanairana tao ambaravarana...ring, ring...nihazakazana i Tahiana nanokatra ny varavarana !
- "Manao ahoana !!!" hoy i Fano nitsikitsiky, ny tanany ilany mitazona fehezam-bonikazo anaty vazy sady midoroboka tsara. Fitafy sy fihaingo izao! Ananany tokoa aloha e! Nifanoroka izy roa.
- "Mandroso Fano an! Ho ahy ve ity voninkazo ity? misaotra betsaka ! sady norohany indray i Fano. Nampandrosoany ny vahiny ary dia nasainy hipetraka teo ambony seza lava aloha. Lasa nankany an-dakozia izy nony avy eo nanohy ny fikarakarany ny sakafo.
- "Fantatro mihitsy fa mbola misy anampiana anao ato," hoy i Fano niala teo amin’ny toerany.
- "Ka ianao tonga aloha loatra ko! mbola tena mamarana ny fikarakaràna mihitsy aho izao!"
- "Noana angaha i Fano," sady notolorany ovy voahendy mafanafana tsara iny ity lehilahy.
- "Ie, tena noana aho, fa ny tena mahanoana ahy koa dia ianao ka!"
- "ayyiii!" nandrakandraman’izy roa teo izay potipotika hanina tsy mbola voavoatra, ary vetivety fotsiny dia nofehezin’i Fano avy ao aoriana i Tahiana, norohany tsimoramora ny hatony. Nahatsiaro nangoritsina kely ny anao vavy. Somary taitra koa ny vatany manontolo nahatsapa ilay oroka mamy nitondra hafanana avy ao aoriany tao.
Nitodika kely izy dia nifanoroka izy roa, oroka lava toa nalaina ny hisaraka.
Niala vetivety i Tahiana, najanony avokoa ny afo rehetra na ny entona na ny mandeha amin’ny herin’aratra. Nosarihiny tamin’ny tànana amin’izay i Fano hanaraka azy. Niala tao an-dakozia izy roa ary nifindra tao amin’ny efitra ilany, efitra fidiovana, tsaroany tampoka ilay nataon’izy sy Hery voalohany ka tiany handramana indray.
Vao tonga tao, tsy nisalasala mihitsy i Tahiana nanala izay akanjo teny aminy, nahantony tahaka ny tsy teo. Variana i Fano nahita voalohany ity vatana tsy manam-paharoa an’i Tahiana. Ilay string kely maintimainty sisa no teny aminy. Tsy nahateny intsony i Fano fa dia variana nijery fotsiny. Ity iray koa moa, tsy nanao afa-tsy izay hisarihina azy hampitombo ny filàny.
Nanatona i Tahiana dia nifanoroka izy roa, novahany tsirairay ny bokotry ny lobaka teny amin' i Fano. Novahany koa ny fehikibo, ny bokotry ny pataloha ary dia tsy ela akory taorian'izay dia niborotsaka moramora tamin'ny tany ny patalohan'i Fano. Nasitriky Tahiana avy ao aoriana ny tanany dia nalatsany ny silip teny amin’i Fano. Tahaka ny tsy teo koa ny nanalàny ny kirarony.
Nosafosafoiny amin’izay ny lamosiny, i Fano amin’io tsy nahahetsika intsony sady nihenjana tsy nisy ohatran'izany ny filahiany.
- "Avia!" hoy ihany i Tahiana nony avy eo sady notaritiny hiditra tao amin'ny toerana fandroana i Fano. Nanaraka azy i Fano ary dia nalefa moramora ny rano mafana matimaty aloha. Nanomboka amin’izay ny safosafo madinidinika teny amin’ny vatan’izy roa. Maika ery ny lehilahy hikitikitika ireto nono tsy manam-paharoa nivelatra teo anoloany. Ny hafanan’ny rano koa moa tamin'io nanampy tosika ny fahafinaretany, ny safosafo sy ny orokoroka manginy fotsiny. Tampoka teo, nitodika i Tahiana dia nanome lamosina. Nahankiny tamin’i Fano ny vatany, tsapany ny firidiridin'ny filahian’i Fano mikasika ny vatany. Najanony anefa ny rano dia naka savony izy, dia natolony an’i Fano. Azon'i Fano antsaina ny tiany hatao ka dia nosoran’i Feno savony moramora ny nonony izay somary niha henjana ny lohany. Nampiakariny kely ny tanany nony avy eo hanosotra savony teo amin'ny soroky Tahiana izay maka fihiny mafy ery. Niverina teo amin'ilay loha nono maranitra indray ny tanany roa nony avy eo sady manafosafo ihany no nanohy nidina nakeo amin'ny silipo manify mbola teny ankoditry Tahiana. Natsofony tampoka tany ny tanany ankavia tsy nitazona ilay savony.
- "mmmmhhhh," hoy i Tahiana mimolomolom-pahafinaretana. Nosafosafony moramora teo aloha ny molon'ny zohim-pahafinaretan'ity olontiany. Henony nihahenjana ny kitson'ny fivavian'i Tahiana. Nampidininy moramora ny fanondrony hanakatra ilay molom-pahafinaretana teo ambany izay tsapany ohatran'ny niha naditidity. Tsy andriny intsony fa tonga dia nampidininy ilay silipo dentelle manify efa hotsaky ny rano teny amin'i Tahiana. I Tahiana amin'io tsy miteny mihitsy fa toa miandry fotsiny izay ataon'i Fano azy. Ny hany nataony dia ny nanetsika ny feny anakiroa mba hampilatsaka ilay silipo tateraka amin'ny tany. Afaka avokoa ny fitafiana rehetra teny ankoditr'izy roa. Ny roatran-tsavony no hany sisa hita nanakotakona ny faritra sasantsasany tamin’ny tenany.
Niakatra indray ny tanan’i Fano, dia nijanona teo amin’ilay telolafy iafenan'ny zohim-pahafinaretan'i Tahiana. Niverenany nosafosafoiny mora indray. Nampifandimbiasany teo ny tananay.
- "Tiako be izany ataonao izany," hoy Tahiana mahatsiaro ny onjam-pahafinaretana miakatra aminy.
Tsy niteny aloha i Fano sady nampiakariny hamonjy ny nonon'i Tahiana efa sasa-miandry ny tanany ilany. Nakimpin’i Tahiana ny masony, sonanika amin’ity ataon’ny olon-tiany izy. Niredareda tao am-pony ny faniriana sy ny fitiavana ity lehilahy miaraka aminy.
Nihorirana vetivety izy dia nosintoniny ny filahian'i Fano efa mihenjana be aok’izany. Nohosorany savony kely ny tanany aloha dia nakorisany tamin’ny halavan’ilay filahiana teo. Ny tanany ilany amin'io niakatra nanongo moramora ny lohanonon'i Fano. Taitaitra avokoa ny tsirim-panentan’ity lehilahy efa babony rahateo. Rehefa vita izay rehetra izay, dia nalefany indray ny rano. Ny fifanorohan'izy roa amin'io tsy hita ho tantaraina intsony. Nony avy eo, nalefan’i Fano ny tanany hisarika ilay lamba famafàna teo akaiky teo. Natafiny an’i Tahiana hanamaina ity vatana tsiriritiny loatra. Nataon’i Tahiana tahaka izay koa izy rehefa avy eo. Tsy nampoizin'i Tahiana, nobatain'i Fano tampoka izy ary nentiny nivoaka ny efitra fandroana. Nampofoiny teo ambony seza lava aloha sady norokorohany teo. Nyy tanan'izy roa amin’io mikaroka hatrany izay safosafo hampiakatra ny fahafinaretana tsy tiana hijanona intsony. Tsy naharitra intsony i Tahiana nony farany :
- "ndao ohany ambony fandriana isika" hoy izy.
- "Fa aiza ny efitranonao?" hoy i Fano sady toa tsy andriny ery izay hiseho manaraka.
Tsy niteny i Tahiana fa ny fanondrony fotsiny no natondrony niakatra. Izy amin’io tahaka ny tosahan’ny hafanan’ity lehilahy miampofo azy.
Tsy nisalasala i Fano fo tonga dia nibeda an’i Tahiana indray ary nitondra azy niakatra ny tohatra. Tsy nisy niteny izy roa fa ny fanondron’i Tahiana no naviliviliny hanondro ny efitranony. Tsy nihidy ny varavarana tao ambony fa tonga dia natosika fotsiny. Nopihan'i Tahiana ny fampirehetan-jiro izay tsy lavitry ny varavarana dia niditra izy roa. Mbola tsy nahita efitra tahaka izao i Fano, misy hazavan’ny jiro mitaratra toa kintana manazava ny valin-drihana miloko manga antitra. Ireo karazana hosodoko manenika ny trano koa nahavariana. Avy hatrany dia napetrany moramora teo ambony fandriana aloha i Tahiana. Tsikaritry Tahiana fa somary nihena ny hamafin’ity filahiana manoloana azy ka dia notakariny vetivety, nosintominy moramora, nosafosafoiny tamin’ny ankihibeny ilay lohany malamalama iny.
Tsapany koa fa na ny hamafin’ny fahafinaretany teo aza toa tsy dia reny intsony tamin’ilay niakatra ny tohatra teo, dia nalefany koa ny tanany ilany hanafosafo ny tenany, nanomboka hatreny amin’ny nono dia nidina moramora nikorisa teo amin’ny kibo ary avy eo nisafo ilay faritra telozoro irafetan’ny fahafinaretany. I Fano amin’io maka fy ity ataon’i Tahiana aminy. Nihenjana tsara indray ny filahiany. Iny i Fano ndeha hiakatra teo ambonin'i Tahiana iny no natosiky Tahina moramora tamin'ny tanany ny lohan'i Fano hidina teo amin'ny valahany. Takatry Fano avy hatrany ny zavatra tadiaviny.
- "Efa fatatro hatramin’ny voalohany," hoy i Fano sady nidina ambanimbany ihany izy. Natosiny niakatra kely aloha i Tahiana hiondana eo andoham-pandriana, dia naka fitoerana tsara ny lehilahy. Noraisiny ny felatongotry Tahiana dia notsetsafiny moramora ny ankihiben-tongony. Nikiakam-pahafinaretana ny anao vavy. Fahafinaretana mbola tsy niainany hatramin'izay no tsapany. Nifindra tamin'ireo rantsana madinika i Fano nony avy eo ary dia nanomboka nitankisinkisina toa tsy hitany izay hasiany ny tenany ny anao vavy. Fahafinaretana hafa kely mihitsy ity tsapany ity. Natahotra mafy izy fa raha izao fahafinaretana tsapany izao no mitohy dia tsy ho tanany intsony fa dia ho tonga tsy ho ela any amin'ny farantampom-pahasambarana ny tenany. Toa tsapan'i Fano fa nankafihiny loatra ity olontiany ka dia naleony aloha najanona kely sady nanomboka nanoroka moramora ny ranjon'i Tahiana izy no niakatra nankeo amin'ny zohim-pafahinaretany. Nosokafany hivelatra tsara ny fen'i Tahiana hahitany ireto molom-pivaviana roa efa vonton-drano somary madity. Tonga dia natohony tampoka teo ny molony sady nanomboka nolelafiny moramora ireo tsiranoka nivangogo teo. Nisento kely i Tahiana. Toa nisy rian’aratra madinika nandady tamin’ny vatany. Vao maika niampy ny hamandoana teo amin'ny fivaviany. Tsy toy ny eto antany intsony ny fahatsapany ny tenany. Novelariny tsara ny feny no sady ningainy ambony ny tongony roa mba hahitan'i Fano tanteraka ny momba azy rehetra. Onjam-pahafinaretana avo be no misamboaravoara manenika ny vatany, te-hikiakiaka izy fa tsy afaka, te hampijanona izao ataon’i Fano azy izao fa tsy nahateny. Toa tiany loatra izay atao aminy. Miontanontana tsy nisy ohatran'izany ny molotry ny fivaviany. Mandranoka izay tsy izy, mila hitosa-dranom-pahasambarana foana ihany koa.
Nosokafan'i Fano tamin'ny rantsantanany roa amin'izay ny molom-pahafinaretan'i Tahiana nony avy eo. Ary tamin'ny fihetsika tony no nitohofany ilay lava-piti vonton-dranoka. Natsofony moramora ny lelany hiditra tany, nitondra hafanàna mivaivay tao anatin'i Tahiana izany ary toa tsy tandriny ny fihetsiny fa dia ningainy ny maojany mba hakany fihiny tsara. Niala kely aloha i Fano nony avy eo dia niverina indray ary tonga dia ny lelany mihitsy no nivezivezy niaka-nidina teo amin’ilay faritra mitondra tosam-pahafinaretana.
- "mmmhhh…, mmmhhhh,.. Fano an! Ataonao ahoana kay aho izany e? hoy izy miangoty tsy nisy ohatran'izany. "Tena...tena tsara be lesy a…" hoy ihany izy sady nisefosefo maka tsirony.
Rehefa hitan’i Fano fa mila tsy ho tantin’i Tahiana intsony izay nataony dia niala tanteraka izy, ary ny tanany no nasolony ny molony hitazona ilay hafanana sy ny hamafin’ny fahafinaretana nanjo an’i Tahiana teo. Niakatra teo ambonin'i Tahiana tamin'izay izy. Nanakaiky an’i Tahiana sady nanoroka indray nampita ny fahafinaretana azony tamin’ity vehivavy.
- "Efa tena lasa lavitra mihitsy aho teo, tena saika safotra aho! Marina e! Hoy i Tahiana
Tsapan’i Fano fa efa miziriziry mafy dia mafy loatra ny filahiany sady efa misy tsiranoka madity be koa nivoaka teo amin'ny lohany dia naleony nanapa-kevitra ny hiditra tany anatin'i Tahiana amin'izay. Somary niarina izy ary nandoalika teo anoloan'i Tahiana. Nosintoniny i Tahiana hanaraka azy sady natohony hifanitsy tamin'ny kibony. Azon’i Tahiana avy hatrany izay tiany hatao, tsy nisalasala ny anao vavy fa tonga dia nilalao ilay nofo vonton-dra ary notsetsafiny ilay lohany malama vonton-tsiranoka teo. Nolalaoviny tamin’ny lelany dia nidina tsimoramora nanaraka ilay vatany hatreny amin’ny fotom-pen'i Fano izy nony avy eo. Niverina nanorokoroka niakatra indray nony avy eo ary dia natsofony moramora hiditra tany ambavany ny filahian'i Fano arak’izay farany azony natao. Somary lehibebe ihany anefa ny fitaovan'ity olon-tiany ka zara raha tafiditra tany ny antsasany dia tsy maintsy nitsetsitra nivoaka ny anao vavy. Nikiakam-pahasambarana ny anao lahy nahatsapa ny fisosan'ity molotra malefaka malamalama eo amin'ny filahiany. Fahasambarana tsy nisy ohatran'izany no tsapany. Navoakan'i Tahiana kely aloha ilay izy nony avy eo sady hoy izy hoe:
- "mmhhh, ngeza be izy izany ry Fano, angamba mandravarava mihitsy io an!,"
Sady nosafosafoiny indray ilay tehina mifono hoditra mihenjana tsara.
Tsy niteny i Fano fa ny molony fotsiny no natsikiny kely sady naveriny nakipy indray ny masony maka fihiny amin'ity ataon'i Tahiana azy. Tsy naharitra intsony i Fano nony ela fa natosiny hidaboka hitsilany teo ampandriana tamin'izay i Tahiana. Nakariny teny an-tsorony indray ny ranjon’ity olontiany. Nampanantoniny ny zohim-pitiavan'i Tahiana ny lohan’ny filahiany. Vonona ny handray ity fahafinaretana fara-tampon’ny nofo izy.
Nosakanan’i Tahiana tampoka anefa!
- "Fano an ! andraso aloha, 14 andro androany mihitsy ny …. "
- "Dia ahoana," hoy ity farany somary gaga. "Fa misy inona?"
- "Ka efa hoe 14 andro izay ny fadim-bolako, aleo aloha mitandrina mba tsy hanahirana."
- "Vitako foana ny mitandrina an'io fa aza matahotra ianao."
- "Aleo aloha asiana ihany fa sao…" sady nanakatra nanokatra haka fimailo tao anatin’ilay vata sarihina tsy lavitra teo i Tahiana. Nosokafany dia nomeny hatsofoky Fano.
- "Teritery be ange izy itony e! jereo fa mifinjifinjy be." Hoy i Fano sady manafosafo ny filahiany ihany.
- "Tsy maninona io fa ny fahafinaretana foana no tadiavintsika tiako an! Sady mahazo fafiny bebe kokoa aho rehefa milamina ny saiko."
Nomandomandoin’i Tahiana tamin'ny "KY" aloha ilay filahiana mifono dia naka fitoerana tsara ny anao vavy handraisany azy. Avy hatrany dia natsofok’i Fano moramora ity filahiany, nalentiny tsara, dia nahemony, nataony in-droa, in-telo dia hoy izy nony avy eo:
- "Aleo mitsongoloka ka! izay no hitako fa tsaratsara kokoa."
Tsy namaly i Tahiana fa avy hatrany dia nanaiky sady nampaka toerana tsara ny tongony sy ny tanany, dia nanolotra manontolo tsy ampihambahambana ny fitombenany an'ity olon-tiany. Nanaitra ny tsirim-panentanana rehetra tany anatin'i Fano ny zavatra nanoloana azy ary dia tsy ariny fa no nosafosafoiny tsara teo aloha ireo nofo toa miendrika tendrombohitra roa, nalefany teo afovoany ny ratsan-tanany nony avy eo hitsapa tsara ny hamandon’ity zohim-pahafinaretana tiany hidirana. Nokitikitihany mora, dia natsofony aloha ny ratsan-tanany hanaitaitra azy tsara. Vao nahatsapa izany i Tahiana dia nanomboka nimonomonona izao teny tsy fantatra rehetra izao. Onjam-pahafinaretana hafa indray no nikoriana tany anatiny tany. Rehefa tsapan’i Fano fa ampy tsara ny safosafo nataony dia naka toerana amin’izay izy sady nampiditra ny filahiany efa tena mafy dia mafy finjain’ny fimailo.
Vao tafiditra tao amin'ny lalina izy dia najanony kely tao aloha. Henony ny fiketoketoky ny hozatr’i Tahiana manery azy tsy te-hivoaka. Nosintoniny mora dia nampidiriny indray.
Feno dia feno ny anao vavy, tahaka ny misy lanja ampidirina any anatiny any mameno ny banga tao aminy. Heniky ny hasambarana ny tenany iray manontolo. Tsy misy zavatra henony afatsy ny tosam-pahasambarana entin'ny filahian'ny Fano midona any anatiny lalina indrindra any. Tsapany nihamafimafy tamin’izay ny tosika sy fisintonana nataon'i Fano ary dia tahaka ny misy herin’aratra mihitsy tsapany mikoriana any anatiny maheno izany. Ny hozany amin’io manery toy ny vahoho(1) ilay tehin’ny fahafinaretana mitsofoka any anatiny. Samy mankafy izy roa, nifampita hafatra, nifanome hasambarana.
Lasa ny fotoana, nihamafy hatrany ny fisefosefoan'i Tahiana, nidobodoboka mafy ny fony sady nimenomenona teny tsy miloaka ny molony.
- "annn, aaaaannnn, aaaaaaaaannnnnnnnn ! sady nikiaka mafy araka izay azony natao izy sady toa ila tsy hahazaka ny tenany intsony.
Najanon’i Fano ny fihetsiny, tsapany amin’izay ny fivavian’i Tahiana toa miemponempona, maneritery tsy hay najanona ity filahiany mbola eny an-dalam-pahatongavana. Nijanona aloha izy, Namonjy nitsilany teo ampandriany izy sady nasainy namonjy nipetraka teo ambony hifanatrika taminy i Tahiana. Ity farany amin'io mbola misefosefo hatrany taorianan'iny tosam-pahasambarana faran-tampony niainany teo iny. Nalainy ny filahian'i Fano dia namidiriny tao anatiny indray. Somary naka aina kely izy aloha sady nitankisinkisina teo ambonin'i Fano. Tsy ela taorianan'izay dia efa taitra indray ny tany anatiny rehetra tany. Nanomboka nataony nihahaingana tsikelikely ny fitankisinana teo ambonin'i Fano sady naka toerana tsara izy nisabaka sady mijery tsara ilay filahiana mihenjana be miditra sy mivoaka any anatiny. Tsapany miverina indray ilay onjam-pahasambarana niainany teo, tahaka ny nangovitra ny anao vavy, mila hianjera amin’ny toerany fa dia notazonin’i Fano mafy. Ity farany rahateo efa mahatsapa fa akaiky koa ny fahasambarany.
Niarina ny lehilahy, nisintona ity olon-tiany hidaboka hanaraka azy, tafala tampoka tao anatin’i Tahiana ny filahiany. Nihiaka hadisoam-panantenana kely izany i Tahiana sady nisambotra ilay izy haingana sady nampiditra azy tao anatiny. Asa na nanao ahoana fa ny nidiran'i Fano tao anatin'i Tahiana no ela dia tojo tosam-tampom-pahasambarana vaovao indray ny anao vavy. Vizana sy torovana izy nony avy eo toa tsy nahahetsika, efa manakaiky ny varavaran’ny fahasaforana.
Nitsangana i Fano, sady namoritra ny lohaliny indray teo anatrehan’i Tahiana, nalany toy ny tsy teo ilay fimailo dia nofehezin’ny tanany ny filahiany efa akaiky ho tonga amin’ny faratampony. Nofeheziny sady nosafosafoiny mafy….ary, indro nitosaka tena an-kibon’i Tahiana ilay ranom-pahasambarana mbola mafana izay toa nanaitra azy tamin’ny fahavizanany teo.
Heniky ny fahasambarana izy roa. Samy vizana tanteraka, nidaboka teo ambony fandriana amin’izay ny lehilahy. Nahatsiaro te hatory mafy. II Tahiana kosa nanafosafo ny kibony voatondraky ny ranom-pitiavana teo. Naka lamba hamafana azy nony avy eo dia nanoroka ity olontiany vaovao nanome fahasambarana azy. Tsy nisy niteny izy roa fa toa samy tony nifamihina nampita ny vetsovetsom-po tany an-tsaina avy. Tafahoana tokoa angamba ny tia sy ny manina.
Afaka fahefatr’adiny taty aoriana,
- " Noana be aho izany, angaha moa isika tsy hisakafo indray? Hoy i Tahiana.
- "Ie, izay aloha ny sakafon’ny nofo fa hiditra amin’ny sakafon’ny kibo indray izao! Hoy i Fano namaly sady nitsiky.
- "ha, ha, ha!" hoy i Tahiana nihomehy fotsiny, .......izay tonga farany any anaty efitra fandroana ary no mamelatra ny latabatra! Sady niharina haingana izy ndeha hanokatra ny varavarana midina mankany ambany. Fantatry i Fano fa izy no tian'i Tahiana hamelatra latabatra dia naleony niarina moramora sady nitsiky tamim-pitiavana be!